Banyere GIS | GIS
Branlọ Ọrụ Alaka
Ndị isi na ndị isi njikwa
Njikwa ogo mma
Nnyocha ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Nnyocha zuru ezu
Nhazi, ime na nkwenye maka nlele
Njikwa ngwa ahịa na mmepe
Nyocha ụlọ ọrụ azụmaahịa
Nchọpụta & njikarịcha maka sistemụ nchịkwa
Ijikwa njikwa oru ngo
Qualitylọ nyocha ezigbo injinịa
Managementhụ maka njikwa
Respontụle Ọrụ Maka Ọrụ Ọhaneze
Nnabata nke ị nweta gọọmentị
Nnabata nke Ngwa ahia nke Ugbo
Ngwongwo dị nro
Ngwongwo siri ike
ANSI na AQL
Okwu njikwa mma
GIS (General Nnyocha Ọrụ Co., Ltd) bụ ọkachamara dị elu na injin na njikwa njikwa na ụlọ ọrụ ọrụ. Ezubere ya n’inyere ndị ahịa aka ịmalite ma melite mmesi obi ike na njikwa mma ma nyere ndị ahịa aka ịzụlite ma na-elekọta ndị na-ebubata ha. Ruru ya site na nchịkwa General nke Nlekọta ogo na ichekwa nke PR China, GIS anọwo na-enye ọrụ nyocha nke ndị ọzọ, nyocha osisi yana njikwa njikwa mma, nnwale ngwaahịa na nyocha na inyocha injinịa mma kemgbe 2005.
2005, GIS mebere njikọta site na Nweta Nkwado Ego nke China Association for Quality na Fujian Progancial Quality Association.
N'afọ 2009, GIS natara akwụkwọ ISO9001 site na Asslọ Ọrụ Na-enyocha Nkwa nke China Association maka Ogo.
2010, GIS natara Asambodo nke ntozu maka Institution of Inyocha na Mbupụ Ihe Nnweta na Nnyocha si AQSIQ (General General of Quality Supervision ， Nnyocha na iche iche nke PRC).
N'afọ 2012, GIS nwere otu nke Nnyocha Mwepu Nwepu na Chearantine Association ma họpụta ya ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka njikwa ụlọ ọrụ nyocha na Mbubata Mbupụta na Ala Ala nke Association ahụ.
N'afọ 2013, GIS natara asambodo nke CNAS-C101 (ISO / IEC 17020) site na nnabata nke China National China.
2015 ， GIS bụ onye nyocha nke Fujian na iche iche kwụrụ ọtọ dịka ndị nkuzi azụmaahịa Fujian free Fuzhou Pingtan (ngwaahịa ndị ọrụ dị mbubata sitere).
2016, GIS ka akwadoro ka Fujian nke n’oru mpi nke ikpo okwu oha na eze nke ulo oru ndi ozo.
GIS nwere ụlọ ọrụ iri na abụọ na China niile. Isi ụlọ ọrụ dị na Fuzhou, Fujian. Ụlọ ọrụ iri na otu ndị ọzọ dị na Shunde, Dongguan, Shenzhen, Xiamen, Ningbo, Hangzhou, Suzhou, Qingdao, Tianjin, Jinan na Zhengzhou. Na nkenke, anyị arụpụtala ọrụ ọrụ nyocha na China. Ruo ugbu a, GIS nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100 ijere ndị ahịa ozi. Ndị na -ahụ maka njikwa mma anyị, ndị na -enyocha osisi, ndị na -enyocha ngwaahịa, ndị injin na -emepụta ngwaahịa na ndị injinia mara mma bụ ndị injinia ruru eru. Ọtụtụ ndị okenye na -ebupụ ọrụ dị iche iche na -etinyekwa aka na GIS. Mgbe ọtụtụ afọ nke mbọ gasịrị, GIS na -agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị asọmpi na nke na -emetụta ụlọ ọrụ a na China.
Nyere ndị ahịa aka iwulite ma ọ bụ melite sistemụ njikwa dị mma, chọpụta nsogbu dị na ngwaahịa ma nye ụzọ ọkachamara iji belata ihe ize ndụ nke ịnata ire ere ma belata mbibi ndị ahịa n'ihi ngwaahịa na-adịghị ala.
Nyere ndị ahịa aka ịzụlite ma na-elekọta ndị na-ebubata ya. Nye ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ maka imeziwanye ikike nrụpụta nke ndị na-eweta ngwaahịa na mmesi obi ike dị mma na ike njikwa, kwalite uto nke ndị na-ebubata ya na ndị ahịa na ụlọ ọrụ.
Na-enye ndị ọkachamara ọrụ nyocha, nyocha ihe ọkụkụ, njikwa njikwa ọrụ, nyocha ngwaahịa na nnwale na ọrụ inyocha njikwa ọrụ na njikwa njikwa maka ISO 9001, ISO 14001, ISO / TSI 16949, SA8000, QS9000, OHSAS18000, HACCP, GMP, Nchekwa ihe onwunwe. ụkpụrụ maka ọrụ dị iche iche.
Usoro nchịkwa tostudying kachasị mma na usoro nyocha nke usoro e-azụmahịa, designand na-enye ndị nrụpụta na nyocha ụlọ ọrụ azụmaahịa, nyocha ngwaahịa, njikwa ọrụ maka ikpo okwu e-azụmaahịa na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị.
Nkà ihe omumu ahia ayi: Ndi ahia, ndi n’ile ahia, ndi mmepe.
Ọ bụ ọrụ anyị ka anyị na-eme ka ọrụ anyị na-aga n'ihu ka ndị ahịa anyị afọ ojuju GIS na-elekwasị anya n'uto ndị ọrụ anyị. Anyị ga-eme ike anyị niile ịnye ndị ọrụ anyị ohere. N'ụzọ dị otu a, anyị na ndị ahịa anyị nwere ike imekọ ihe ọnụ.
Companylọ ọrụ Uru:
Nkwanye ugwu di iche iche n’ọrụ; Kporie ndu obi uto.
Ogo na-ekpebi uru; ibu ọrụ na-ekpebi ụdị mmadụ ọ bụ
Visionlọ ọrụ ọhụụ
Mara ikike siri ike nke ịchọpụta ihe ndị ahịa chọrọ; Nweta ihe okike, ikike ime ihe na ikike ịkwado maka idozi mmemme nke ndị ahịa.
Company ozi ：
Gosi ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù sitere n'aka ndị ahịa niile
Floor10, Ihe owuwu C, Unis Sci-Tech Park, Nke 30 Wulongjiang Road, High-Tech Mpaghara, Fuzhou, Fujian, China
© nwebisiinka - 2010-2022: Edebere ikikere nile. Atụmatụ - Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
Nke atọ Party Nnyocha , Factory Assessment , Full Online Nnyocha , Na Usoro Nnyocha , mbụ Production Check , akpa Loading Supervision ,